Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – SHAREEECADA ISLAAMKA….(qaybta- 1aad)
SHAREEECADA ISLAAMKA….(qaybta- 1aad)
Jun 24, 2015 ANALYSIS, BORAMANEWS.CO 0
Shareeecadu waa xeer ku qotoma hab-dhaqqanka noloshsha ummadda islaamka ah. Kelmedda shareeecada macnaheedu waa dariiqqa cad ee tooosan, haddii aynnu si kale u dhignona: “waa hannaaan sharciya oo uu Ilaaahay u soo rogay in ay Bani-Aaadamku isku xukumaan.
Shareeecada ama xeerka islaamku waa qawaaaniiin akhlaaaqda wanaagsan ku dheeehan ee loogu tala galay in ay muslimiiintu ku dhaqanto. Waxxayna ku salaysan yihiiin labada (2) iloood ee muhiimka ah: (1). QURAANKA kariimka ah, iyyo (2). SUNNAHHA Nebiga (scw), ujeeeddada ka danbaysaaana waxxay tahay guuushsha & daryeelka Aaadanahha If & Aaakhiroba.
Shareeecadu waxxay qoraysaa xidhmo dhan oo xeeerar ah oo hanuuuninayya kuna hagayya Bani-aaadamka dariiqqa tooosan, si ay isu faraan Wanaagga (Macruufka), bulshadana uga sabata-bixiyyaan Xumaaanta (Munkarka). Waxxayna shareeecadu ummadda ku hagtaa jidka tooosan ee u horseedayya Horuuumarka, ku guuulaysashada noloshsha & hanashada farxadda Eeebbe. Waana hannaanka sharci ee ugu wanaagsan ee uu Ilaaahay Aaadanahha u soo dejiyyey.
QURAANKU waa saldhigga ugu muhiimsan ee shareeecada, halka uu sunnahha Nebiguna (SCW) inaga caaawiyyo qorshahha & sida aynnu u adeeegsan lahayn qawaaaniiintaa / sharciyyadaa. Tusaaale ahaaan Quraanku wuxxuu ina farayyaa; In Salaaadda la ooogo, Ramadaaantana la sooomo, Sakadana la bixiyyo, go’aaammadana lagu gaaadho wada tashshi, Ha ku kasban dhaqaaale hab xun, hana ku kharash garayn waxyaaalo xun-xun ama khaldan, oo aanu Ilaaahay raaalli ka ahayn.
Laaakiin Quraanku inooma qeeexayyo ama sharraxayyo sida aynnu u Tukanaynno, u Sooomaynno, Sakada u bixinaynno & waxyaaalahha la midka ah. Waa Sunnahha Nebiga (SCW) ka ina tusayya sida aynnu u qabanaynno oo ugu camal-falaynno awaaamiiirtaa uu Ilaaahay ina faray. Quraanku waa kitaabka ugu muhiimsan ee hanuuuninta, Nebiguna wuxxuu ina baray sida aynnu u raaacaynno ama u fulinaynno waxyaaalahha uu Quraanku (hadalka Ilaaahay) ina farayyo.
Nebigu (scw) inooma sheeegin oo keliya sida aynnu u raaacaynno hanuuunintaas, ee isaga laf-ahaaantiisuba wuu ku camal-falayyey. Nebi Maxammed noloshshiisu waxxay ahayd noloshsha Quraanka.
Shareeecadu waxxay u leedahay xeeerar qaab kasta oo nololeed, waanay dhammays-tiran tahay, oo way qumman tahay, adeeegsigeeduna wuxxuu dammaaanad qaaadayyaa guuul, Daryeel & nabad-gelyo adduun-kaynnu jooogno & Aaakhiroba.
Waxxay kaloo leedahay shareeecadu laba (2) iloood oo kale oo ka soo unkama sharciyyada Islaamka, kuwaas oo kala ah:
(1). IJMAAC: oo ah fekred / Ra’yi laysku raaacsan yahay, waxxana loo adeeegsadaa marka aanay jirin go’aan cad oo laga soo dhirin dhirin karo Quraanka & Sunnahha Nebiga (scw). Xaaaladdaas marka lala soo kulmona, waxxa uga wakiiil ah dadweynahha Culamaaa’u-diinka ku xeeel-dheer aqooonta Quraanka & Sunnahha Nebiga (scw), kuwaas ayaa inta ay wada fadhiiistaan isla falanqaynayya oo inta ay isla gorfeeeyyaan isku raaacaan xeer cusub oo lagu xallilo dhibaaatadaas gaarka ah. Ra’yigaas laysku waaafaqsan yahay ee (ijmaaccu) wuxxuu hirgalay casrigii Khulafaa’u-Raashidiinka.
(2). QIYAAAS: oo uu macnahheedu yahay tixraacca waxyaaalo is shabbaha (isu-eg), oo mid kasta la barbar dhigo mid u eg. Arrintaasna waxxa loo adeeegsadaa duruuufahha aan wax daliil ah lagu hayn Quraanka & Sunnahha nebiga (scw) midna.
Xalka dhibaaatadaasna waxxa lagu gaaadhaa kabka ka qiyaaas-qaadashada iyada oo la barbar dhigayyo arrin sidaas oo kale ah ama ay isku dhoow-dhoow yihiin oo beri-hore dhacay, oo markaa tanna lagu dabbaqayyo.
Dhaqqan keenna soomaalidu wuxxuu leeeyyahay arrinkaas oo kale, waxxayna garyaqaaannadu ku saleeeyyaan dacwadahha iyaga oo leh: Arrinku ma ugub baa, mise waa soojireeen? Haddii uu noqdo arrinku mid ugub (cusub oo aan hore xukun lagu fulin), guddida garta qaaadaysa ayaa isla eegayya arrinka iyaga oo ka qiyaaas qaaadanayya kiiisas hore oo ay is shabbahaan ama ay isku saan-saaan eg yihiiin, ayay ka soo saaaraan xeer ay isku waaafaqsan yihiiin. xeerkaas oo waqtigaa uu soo baxay wixxii ka danbeeeyya ka dhaqqan-gelayya deegaan kaas oo dhan.
OG: Waxxaan filayyaa in uu maqaalkani dadweynahha Soomaaliyeed wax weyn ugu kordhin dooono in ay wax ka ogaaadaan Shareeecada Islaamku waxxa ay tahay. Qaybta 2aad waxxaan idiiin soo gudbin dooonaa toddobaadka danbe, haddii uu Eeebbe idmo .
Abwaan: Ibraahim-rashiid Cismaan Guure (aboor).
Obama hosts Iftar dinner to mark Ramadan — and reach out to Muslims Daawo - Golaha Deegaanka Hargeysa oo isku Fidiyay Dhulka Awdal Dugsi iyo Saldhigna Ka Dhisay Deegaanka Ceel Sheekh